Home Wararka Madaxweyne Gaas “Dowladda Farmaajo waa in aay joojisaa faragelinta Puntland”
Madaxweyne Gaas “Dowladda Farmaajo waa in aay joojisaa faragelinta Puntland”
Iyadoo Maamulka Puntland uu dhawaan isku diyaarinayo doorashada madaxweynaha maamulkaasi ayaa madaxtooyada maamulkaasi waxaa kasoo baxay war qoraal ah oo lagu eedeynaayo dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Warkaan kasoo baxay Madaxtooyada Puntland ayaa lagu eedeeyay dowladda dhexe waxaana lagu sheegay in faragelin qaawan ay ku hayaan arrimaha doorashada maamulkaasi.
Horaan sidaan oo kale waxaa dowladda federaalka eedeyn midaan lamid ah u jeediyay maamulka Koonfur Galbeed Soomaliya oo ku eedeeyay in doorashada maamulkaasi ay faragelin ku hayaan.
Halkaan hoose ka akhriso warka qoraalka ah ee kasoo baxay Maamulka Puntland ee lagu eedeeyay dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Previous articleXildhibaano katirsan Baarlamaanka oo mooshin ka keenay heshiiskii Dowladaha Soomaaliya Eritrea iyo itoobiya
Next articleBaarlamaanka oo ka doodi doono mooshin la xiriira heshiisyaddii uu dhawaan soo saxiixay
Rooble “Lagama aqbalayo Musharax Farmaajo in uu Doorashada Boobo”